tamin'ny admin tamin'ny 06-05-2020
Sichuan XiangYue mpiorina tsipika herinaratra Cop. (XY Tower) dia natsangana tamin'ny 2008. Amin'ny ezaky ny zavatra rehetra dia haingana dia haingana ny orinasa. Ny mpanjifanay dia avy any an-toerana sy any ampitan-dranomasina, tilikambo an'arivony maro no natolotra amin'ny mpanjifa ary ampiharina Sina, Sodana ary maro hafa ...
tamin'ny admin tamin'ny 12-03-2020
XY Tower amin'ny maha-orinasa lehibe ao amin'ny distrikanay, ny lohan'ny distrika dia manome lanja lehibe ary mitaky fitantanana henjana famokarana & fahaiza-mamokatra & fiarovana ny tontolo iainana ny orinasa. Amin'ny ankapobeny, hitondra ny ekipany any amin'ny XY Tower izy ho an'ny insp ...
tamin'ny admin tamin'ny 09-11-2019
Noho ny COVID-19, ny mpanjifanay dia tsy afaka tonga tany amin'ny ozinay mba hijerena ny tilikambo. Tamin'ny 9 Novambra, talohan'ny fanaterana dia nanao ny fivorian'ny tower izahay. Ny karazana tilikambo tsirairay dia halamina fivoriana. ny fonosana fitaovana tsirairay dia halefa ny lisitr'ireo fitaovana ho an'ny mpanjifa sy 5% mo ...
Nahavita herinaratra soa aman-tsara ny tetikasan'ny ZuoGong County
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 16-12-2018
ZuoGong County dia an'i ChangDu City, Tibet. ZuoGong dia iray amin'ireo faritra mahantra indrindra manerana an'i Shina. Ny lahasa lehibe amin'ity tetik'asa ity dia ny famahana ny olan'ny famatsiana herinaratra olona 9 465 amin'ny tokantrano 1.715 ao amin'ny vohitra fitantanana 33 ao amin'ny Bitu Township of ZuoGong council ...
Ekipa mpitsidika ny fanjakana mitsidika ny fehikibo
tamin'ny admin tamin'ny 16-07-2018
State Grid koa no mpanjifanay manan-danja indrindra. Isan-taona dia mandresy mihoatra ny 15 tapitrisa USD ny orinasanay avy amin'ny State Grid ary mitentina 80% ny vola azo amin'ny varotra an'ny orinasanay. State Grid Corporation of China (State Grid) dia orinasam-panjakana (SOE) naorina tamin'ny 2002 teo ambanin'ny ...
Nanangana ny asa voalohany eran-tany tamin'ny tsipika fandefasana DC 1,100-kv i Sina
tamin'ny admin tamin'ny 06-11-2017
HEFEI - Ny mpiasa sinoa vao avy nahavita ny tariby tariby mivantana tamin'ny làlan-kaleha mivantana 1.100 kv tao an-tanànan'i Lu'an any amin'ny faritanin'i Anhui any Shina Atsinanana, izay tranga voalohany manerantany. Ny fandidiana dia tonga taorian'ny d ...
Arindrao ny mpiasa rehetra hanatanteraka fandoroana afo
tamin'ny admin tamin'ny 23-08-2017
Ny vokatra any Myanmar dia fandefasana
tamin'ny admin tamin'ny 06-04-2017
Nahazo fifanarahana avy any Myanmar ny XYTower tamin'ity taona ity ary nahavita ny fandefasana tamin'ity volana ity izahay. ASEAN dia iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka lehibe indrindra ao Shina. XY Tower dia manome lanja betsaka ny tsenan'ireo firenena ASEAN. Ao amin'ny areti-mandringana, ny busi ...